Tilmaama taphoota pirimeerliigii Ingilizii torban kanaa: Livarpuulimoo Yunaayitid? - BBC News Afaan Oromoo
Joose Mooriniyoon yeroo darbe Maanchistar Yunaayitid gara Anfiild fudhatani deeman sana morkataan isaanii akka hin injifanne guddaa ittisan. Gaafa Sambata kanawoo maal godhuuf deemu?
Tilmaama pirimeerliigii torban kanaan xinxalaan kubbaa miilaa BBC Ispoort, Maark Laawuransan, Yunaayitidiif caalsifatuus shakkiis qaba.
Laawroon akka jedhetti, ''Yunaayitid isa bara darbe caalaa fooyyee qaba.''
''Saadiyoo Maaneen miidhameera, Robertoo Ferminihoo fi Filippee Kuutinihoon garuu yoo Yunaayitid karaa kenneef balaa buusuu danda'u. Kanaafuu, akka kuni hin mudanne Moriniyoon gareen isaanii qixeessu natti fakkaata.''
Laawroon 1 qixa bahu jedha - walii galtuu?
Morkataan Laawroo torban kanaa deeggaraa Arsenaal Totanhaamitti dhalateefi wellisaa raapparii Reech 32 jedhamudha.
Reech 32 taphattoota Liivarpuul Daani'el Istariij fi Chaamberlin akkasumas taphataa Arsenaal Aleekis Iwoobii waliin akka walitti dhihaatu dubbata.
Liivarpuul Maan Yunaayitid waliin
Seenaa kanaan dura qabu yoo ilaallu taphni kun tapha guddaa biyyatti akka ta'en hubadha.
Erga yeroo darbe Arsenaal 4 fi 0'n injifatani as, taphi biraa daqiiqaa 90'f ijoolleen Yargan Kiloopp ga'umsa gaarii itti agarsiisan hin turre.
Osoo tapha irra-hin aanin dogongora ittisa irratti raawwataniin qabxii dhabaa turan.
Bara dorgommii baranaa Liivarpuul tapha tokko irratti yoo xiqqaate galchiin lamaa gadi itti seena. Ga'umsa amma irra jiraniin immoo Yunaayitid waan galchu natti fakkaata.
Kilaboonni lamaanuu miidhamaan taphattoota ijoo isaanii dhabu - Liivarpuul Saadiyoo Manee fi Adaam Laalaanaa akkasumas Yunaayitid Pool Pogbaa fi Maaruwaan Felaanii. Lukaakunis waan ga'umsa gaarirra jiru hin fakkaatu.
Murteessaan taphichaa Maartin Atikinsan garuu gama lamaaniinuu qormaata cimaatu isaan eeggata.
Tilmaama Reech 32: 1 -2
Barnileey West Haam
Tapha idila-addunyaaf boqochuun dura kilaboonni lamaan tapha torban lamaan dura taphatan irra-aananiiru.
Leenjisaan kilaba West Haam Silaavan Biilich hojii gad-lakkisu jedhu yeroo dheeraaf odeeffamaa turuus yeroo xumuraa irratti Iswaansii erga injifatani as nami waa'ee isaa dubbatu hin jiru.
Barnileey dirreen ala Evartan injifachuun ala bara dorgommii baranaa qe'ee isaanii Tarf Muuritti Kiristaal Paalaas qofa injifatan.
Barnileey taphattoota ciccimoo qabu hojii cimaas hojjetu saffisa tapichaa to'atani tapahachuu irratti garuu rakkina cimaa qabu.
Kanaafi qixa bahu kaniin jedhe. Qabxii kanaan kilabni kamuu waan baay'ee itti gaddu natti hin fakkaatu.
Tilmaama Reech 32: 0-0
Kiristaal Paalaas Chalsii waliin
Bara dorgommii baranaa Kiristaal Paalaas galchiis ta'e qabxii hin qabani, garuu taphataan isaanii jilba miidhame ture Wilfireed Zaahaa taphatti deebi'uu mala. Gaafa Sambataa taphachuun isaa garuu hin beekamu.
Chalsiin Nigooloo Kaantee fi Alvaaroo Moraataa miidhamaan dhabuus Paalaas isa injifata jedhani yaaduun garuu nama dhiba.
Erga torban lama dura Maanchistar Yunaayitidin 4fi 0 injifatamani as Roy Haadsan waliin yeroo waan qabaatanif sarara duubaan fooyyee agarsiisuu danda'u.
Garuu gaaffiin jiru eenyutu galchuu danda'aadha? Deebii gaaffii kanaa tarii torban biraa eeguu qabna natti fakkaata?
Tilmaama Reech 32: 0-2
Maan Siitii Istook waliin
Balaan konkolaataa erga isa mudate booda Serjiyoo Aguweroon leenjiitti deebi'eera. Kilabichaaf oduu guddaa ta'uus Sambata taphachiisani balaarra isa buusu jedhe hin yaadu.
Maanchistar Siitiin yeroo darbe Chalsii irra-aane ture Aguweeroo waan dhabe rakkate hin fakkaatu.
Istook kan tapha xumuraan Saawuzampitan biraa qabxii 3 fudhate bara dorgommii darbe gara Etihaad dhufe qabxii qooddachuun isaa ni yaadatama.
Barana garuu waan kuni ta'u natti hin fakkaatu.
Tilmaama Reech 32: 1-1
Iswaansii Haadarsfild waliin
Kilaboonni lamaanuu mo'uuf baay'ee rakkatu. Erga Iswaansiin tapha injifate as taphni afur taphatameera. Bara dorgommii baranaas galchii sadii qofaa galchan.
Iswaansiin taphataa isaanii Fernaandoo Liworeentee waan bakka buusan hin fakkaatani.
Haadarsfild immoo taphoota liigii shan keessaa takkayyuu hin moone. Tapha shan keessaas galchii takka qofaa qabu.
Kilabiin Weels Iswaansiin tapha kana injifachu barbaadu. Kana gochuufis waan karaa barbaadan fakkaata.
Tilmaama Reech 32: 1-0
Totanhaam Bornmaawuz waliin
Totanhaam ammas Wembileeyitti injifachuu eegaa jiru. Kuni garuu waan turu hin fakkaatu. Sababni isaas waan Iswaansiin yeroo darbe Totanhaam waliin qixa bahe Bornmaawuz gochuu waan danda'u natti hin fakkaatu.
Gama tokkoon haaluma salphaan galchiin itti seena garuu ga'umsa jifataan Totanhaam Haari Keen irra jiru immoo adda.
Kanaaf jarri Totanhaam kana injifachuu qabu. Iswaansii fi Barnileey waliin qe'eetti taphatani qabxii gatani turan dhaabu qabuun jedha.
Waatford Arsenaal waliin
Arsenaal rakkoo ittisaa qaba - Kosilniin tapha dura ilaalamu qaba. Akkasumas, Shikodiraan Musxaafiin torban hedduuf tapha hin taphatu.
Jarri Arsenaal garuu erga Livarpuuliin akka hin taane ta'ani booda fooyya'insa qabu.
Erga jalqaba A.L.A ji'a Fulbaanaa as taphoota gosa adda addaa irratti torba taphatani jaha mo'ani. Tapha Chalsii waliin taphatan qofaa mo'amani.
Bara dorgommii baranaa akkuma Barnileey Waatford fooyyee agarsiiseera garuu leenjisummaa Maarkoo Silvaa jalatti qe'eetti hin moone, waan tapha gaafa Sambataa ta'uus natti hin fakkaatu.
Tilmaama Reech 32: 3-0
Biraayitan Evartan waliin
Dhuguma Evartan jifataa dhabeera. Rakkoon cimaa gaafa Dilbataa garuu Biraayitan injifachuu dha.
Tilmaama Reech 32: 0-1
Saawuzampitan Niwkaasil waliin
Niwkaasil Liivarpuul waliin gaafa qixa bahe ga'umsa bareedaa agarsiise. Kuni hagam Raafa'el Beniteez kilabicha dadammaqsaa akka agarsiisu fakkeenya.
Jarri Saawuzampitan yeroo darbe Istook walin gaafa taphatan qabxii argachuu qabu ture. Tapha kanaan garuu waan milkaa'an natti fakkaata.
Tilmaama Reech 32: 2-2
Leestar West Broom waliin
West Broom caalaa Leestar rakkoo cimaa keessa jiraatus A.L.A baatii Fulbaana darbe kilaboonni lamaanu hin moone.
Jeemi Vaardiin torban darbe miidhamaan Ingiliziif erga taphatuu dhabe as ga'umsa gaarirra argamuun isaa deeggartootaaf oduu bareeda.
Qabxiin Leestar amma fooyya'a jedheen yaada. Qabxiin West Broom Tooni Puulis jalatti qabullee hagasuma baay'ee na hin yaaddessu.
Tilmaama Reech 32: 2-0